संकटको बेला मैले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन भने, साथीहरुले केन्द्रीय समिति बैठक माग गरे : प्रधानमन्त्री - Himali Patrika
संकटको बेला मैले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन भने, साथीहरुले केन्द्रीय समिति बैठक माग गरे : प्रधानमन्त्री
हिमाली पत्रिका २० साउन २०७७, 2:49 pm
विज्ञहरुले समेत सरकारका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिभिजनको पर्दामा सरकारलाई नखोज्न आग्रह गरेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण देखि लिएर बाढी पहिरो पीडितको उद्धारका काममा अधिकारीहरु खटिरहेका उल्लेख गर्दै उनले रेस्क्यु भइरहेको ठाउँमा गएर सरकार खोज्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरु सडकमा गएका छन संक्रमित मान्छेहरुसँग उनीहरु डिल गर्नुपरेको छ । अनेक कामहरुमा उनीहरु छन् । त्यस्ता कामहरुबाट उनीहरु संक्रमितहरु भइराखेका छन् ।
ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइरखेका छन् । रेस्कयु गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन् । अहिलेको मौसम पानी परेको छ, बाढी आएको छ । सरकारले बाढी गएको पहिरो गएको ठाउँमा तत्काल सरकार थाहा पाउने वित्तिकै जोखिमका साथ रेस्कयु टिम सरकारको तर्फबाट गएको छ । अरुले पनि सहयोग गरेका छन् । तर वौद्धिक जगतको टिप्पणीहरु सुन्छु कहाँ छ सरकार ? काठमाडौंमा बसेर टेलिभिजनको पर्दा अगाडी क्यामरा अगाडि बसेर कहाँ छ सरकारभन्दा कता देखाउने ? त्यो रेस्कयु गएको ठाउँमा हेर्नुप¥यो सरकार छ कि छैन् । त्यहाँका जनतालाई सोध्नुप¥यो सरकार छ कि छैन् । सरकारले जहिले पनि तदारुकताका साथ ज्यान जोखिममा राखेर सरकारी मान्छेरु त्यहाँ खटेका छन रेस्कयु गरेको छ । रिलिफ पु¥याएको छ । ’’
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई परीक्षणको गति बढाउन आफुले सल्लाह दिएको बताए । क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्दै मास्क अनिवार्य गराउन पनि सरकारलाई आफुले भनेको उनले बताए । सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै केही युवाहरु अनसनमा बसेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभापति देउवाले अनसन तोडाउन आग्रह गरिएको बताए । उनले राजनीतिज्ञहरुलाई भन्दा विज्ञहरुलाई बेलाएर छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।